Ukulandisa kwe-ECC | Izincwadi Zamanje
Yebo, kumangaze abaningi, engizithola ngiphakathi kwabo, Ikhathalogi yamahlaya, noma ECC njengoba kwaziwa, imemezele izolo ngokushicilelwa kabanzi ngabezindaba ukuthi izokwethula umlando. Iqiniso ukuthi kufanele baqiniseke impela ukuthi lokho abazokushicilela kuhle, ngoba leyo ewa nayo (umbiko ngokuncipha kokushicilelwa kwezincwadi eSpain isanda kushicilelwa) kuyingozi ukusho okuncane . Impela ngiyasishayela ihlombe lesi sinyathelo. Isitatimende esigcwele ngezansi:
Ukuthi indawo yokushicilela yolimi lweSpanishi ayihambi ngesikhathi sayo esihle kakhulu akuyona imfihlo. Kulowo mongo, ukwethula imigqa emisha yokuhlela kungabonakala njengephrojekthi emiselwe ukwehluleka. Umbono ojwayelekile ngukuthi ezweni lethu abantu bafunda kancane nangaphansi. Kodwa ingabe lokho kuyiqiniso?
Uma besingahlulela okufunwayo ngokuhlinzeka, kungaba njalo. Amatafula ezitolo zezincwadi aqoqa (imizamo eminingi) yabathengisi abathengisa kakhulu, izincwadi "zezinhlobo" eziningi ngokwengeziwe kanye nokutholwa ngendlela engahlelekile kwezimali zokuhlela. Yize kuneziphakamiso ezinkulu (imvamisa ezivela kubashicileli abancane), iqiniso ukuthi kuya ngokuya kube nzima ngomfundi ukubhukuda phakathi kokukhishwa okuhlukahlukene okugcwalisa amatafula ezitolo zezincwadi inyanga nenyanga.
Ukuncintisana kwalesi sikhala, okungezwe ekwehleni kokuthengiswa, kunciphise impilo emaphakathi yencwadi esitolo sezincwadi, ukuze kungabikho muntu ohlela kanye / noma imibukiso yokwenza ikhathalogi yesikhathi eside.
Ukubeka izinto ezinjengalezi, ukumelwa okugunyaziwe, ngakho-ke, kuyindlala, futhi kuhlelekile emtatsheni wezincwadi omuhle, akunakwenzeka: kukhona ukusweleka kwezincwadi, kukhona ukuntuleka kwababhali, kunamazwe amaningi anokumelwa okuncane nokuncane futhi kunzima thola izincwadi eziphelelwe yisikhathi.
Ngaphezu kwalokho, esigabeni sokuhumusha, akuvamile ukuthola izincwadi ezihunyushwe zisuselwa olimini lwebhuloho (amaJapane noma amaShayina ahunyushwa esuselwa esiNgisini noma eFrance kaningi, ngaphandle kokuqhubeka).
Ngakho-ke, ingabe inkinga yokuthi abantu abafundi noma ukuthi asinikezi abantu lokho abafuna ukukufunda nokuthi bafuna ukukufunda kanjani? Kungenzeka yini ukuthi ingxenye yenkinga ukuthi siphelelwe ukwethenjwa ngabafundi bethu?
Vele, akubona bonke abashicileli abadalwa belingana, futhi amaphrojekthi amaningi nangaphezulu avela kubashicileli abanesizotha enza umsebenzi oncomekayo wokukhetha nokuhumusha, kanye nesandulela nokwakhiwa kwesihloko. Futhi kulapho i-ECC ingena khona kanye nokuzibophezela kwethu ekulandiseni ngemuva kweminyaka eminingi yokwenza amahlaya.
I-ECC icabanga ukuthi basekhona abafundi, kepha badinga ukuphathwa ngendlela ehlukile: badinga ukuhunyushwa okunekhono, izincwadi ezikhethwe kahle nezethulwe kahle… kepha futhi badinga ukuqhubeka (kwemisebenzi, yababhali) nokuhlangana.
Amaqoqo wePherimeter neParameter yi-ECC azalwa ngumoya onjalo: sifuna abafundi. Ngokuphindaphindiwe, sizokwethula izincwadi ezinhle, imisebenzi ephelele, nokuhumusha okungaguquguquki kulo lonke uhambo lwethu lokushicilela.
Ukuzibophezela kwe-ECC ukunikeza imakethe okuthile esikholwa ukuthi kuyashoda nokunikeza umphakathi umkhiqizo oqinile ongamelana nokuhamba kwesikhathi emashalofini ezitolo ezidayisa izincwadi futhi wenza ubulungiswa kwabanye ababhali abathi kuze kube manje abakaze banikezwe ulwazi olwanele ezweni lethu noma bakwenze ngendlela engahlelekile.
Ipharamitha izoqoqa imisebenzi yababhali bezincwadi abasezingeni eliphakeme abangakafiki emakethe yaseSpain, noma eseyanyamalala, noma engashicilelwanga nje. Umsebenzi wokuqala, uTodo Malgudi, ufuna ukuthumela umyalezo ngokuzwakalayo nangokucacile. Umbhali wayo, uRK Narayan ungomunye wababhali baseNdiya abaphambili olimini lwesiNgisi kuwo wonke umlando (futhi empeleni, owokuqala ophumelele) kepha nokho ushicilelwe kancane ezweni lethu, izikhathi eziningi kakhulu egcizelela "indianidad" yakhe lapho umsebenzi wakhe weqa kakhulu lokhu kuchazwa.
I-Perimeter, ngokwengxenye yayo, izogxila nasekulandiseni, kepha hhayi ekubhaleni, emisebenzini: umlando, ukubika, kanye nemisebenzi yomuntu. Imilando yababhali abangaqambi, kodwa babone futhi balandise. Umsebenzi wokuqala eqoqweni, i-Complete Journalistic Work ka-Albert Londres, nawo ufuna ukumaka ngokusobala ukuthi isibhamu siyaphi. U-Albert Londres wayengumbhali obalulekile, omunye wabaqali bezindaba zobuntatheli futhi elwela ngokungakhathali ngezizathu ezilahlekile okwathi, ngokwesibonelo, futhi emuva eminyakeni yama-20, wenza uhulumeni wakhe (amaFrance) ukuba avale ijele laseCayenne ngemuva kwempendulo eyadala phakathi komphakathi ezweni labo. Umsebenzi wakhe, nokho, awaziwa ezweni lethu.
Ekugcineni, kwa-ECC nathi siyathanda ukuzijabulisa, futhi ngalokho senze umugqa we-terlter Ego. Njengoba igama layo liphakamisa, lo mugqa wokuhlela uzobhekana nemisebenzi yesinye isitayela: izincwadi zohlobo, kepha ngokuthinta okukhethekile. I-trilogy yokuqala esizoyiqoqa kule lebula ayikho ngaphezulu noma ingaphansi kwesihloko sempumelelo esheshayo nesabekayo esivela eNdiya cishe kuwo wonke umlando wekhulu lama-2.000.000. YiShiva Trilogy, umsebenzi osuthengisile, eNdiya kuphela nangolimi lwesiNgisi, amakhophi angaphezu kwezi-XNUMX XNUMX XNUMX ngesikhathi esifushane, okuyizinto esezivele zenziwa ezihambisana namafilimu futhi ezingayeki ukwephula amarekhodi ezweni lakhe, e ngaphezu kokuwela imingcele ngama-editions kuwo wonke umhlaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » Ukulandisa kwe-ECC